Richmond University Kugamuchirwa Mwero uye Kudiwa Kwekugamuchira 2021: Yazvino Chikoro Nhau
Richmond University yekugamuchirwa mwero chidimbu cheruzivo chakaitirwa pamunwe wako kana iwe uchida kunyoresa chero eiRichmond University zvirongwa. Saka verenga zviri papeji rino nechitendero kuti uzvishongedze neruzivo rwakakwana.
Izvo Zvaunofanirwa Kuziva Nezve Richmond University
Vadzidzi veYunivhesiti yeRichmond vanogona kuenda chena mvura rafting pane iri pedyo neRwizi rwaJames, kana vanogona kumira nezvimwe zveguta zviitiko zvakawanda mukati megore, senge iyo Richmond Folk Mutambo uye iyo Richmond Greek Mutambo.
Yunivhesiti yeRichmond ndeye yakazvimirira institution iyo yakavambwa muna 1830. Iyo ine huwandu undergraduate kunyoresa ye3,161, marongero ayo ari mudhorobha, uye saizi yekambasi iri mahekita mazana matatu. Inoshandisa semester-based academic khalendari.
Inowanikwa muguta guru reVirginia reRichmond, rinova guta rine nhoroondo, rakazara nemapaki, tsika, hupenyu hwehusiku, uye mikana yekuvaraidzwa kwekunze, saka vadzidzi pa yunivhesiti wezita rimwe chete harizombo bhore.
Kune akatiwandei enzvimbo dzinozivikanwa dzemimhanzi mudhorobha, pamwe nezvakawanda zve Restaurants, mabhawa, uye makirabhu. PaYunivhesiti yeRichmond kambasi, chetatu chemuviri wevadzidzi chinobatanidzwa muchiGreek system, inosanganisira dzinosvika gumi nemashanu masangano uye hutsinye.
Kana hupenyu hweGreek isiri yako chinhu, kune anopfuura mamwe makirabhu zana evadzidzi nemasangano kuti utarise, futi.
Zvimwe Zvakawanda nezveRichmond University
Iwo ese-echirume RC Xtreme boka akakodzera kune vatsva ndiani anoda kuenda mukupera kwesvondo mafambiro nema floormate avo, uye vakadzi vechikadzi unogona kurarama nekudzidza kuburikidza nezvirongwa zvakaita seGadzirira kwaMoore, inharaunda yekugara horo yakanangana nekusimudzira hunyanzvi hwehutungamiriri.
Campus imba ndiyo yakakurumbira sarudzo yevadzidzi veese makore, seanopfuura makumi mapfumbamwe muzana undergraduates sarudza kugara mudzimba dzekugara.
Yunivhesiti yeRichmond ndiyo yega chikoro munyika yekushandisa dandemutande semascot ayo akasarudzika, uye ese maSpider mamatimu emakwikwi anokwikwidza muCAAA Division I Atlantic 10 Musangano, kunze kwebhola uye gorofu revakadzi.
Iwo zvikwata inhengo dzeColonial Athletic Association. Vateveri vevadzidzi muRichmond Rowdies kirabhu yemweya vanofarira vatambi - kunyanya kukwikwidza Spider basketball uye nhabvu zvikwata.
Yunivhesiti inopa zvinopfuura makumi manomwe neshanu kudzidza kune dzimwe nyika mapurogiramu, uye vanopfuura hafu yevadzidzi vese vanotora mukana wepasi rose vasati vapedza kudzidza.
Iyo Richmond Nzvimbo dzeyunivhesiti zvinobva mumapuratifomu ane mbiri. Aya mapuratifomu anowana zvikoro zvinoenderana nekuita kwavo pane seti yezviratidzo zvinogamuchirwa zvakawandisa zvehunyanzvi.
Yunivhesiti yeRichmond yakapihwa anotevera madanho;
# 22nd Pakati penyika "Yakanakisa Liberal Arts Makoreji" neUS News & World Report
# 25th "Yakanyanya Kukosha" pakati penyika dzenyika dzakasununguka hunyanzvi makoreji neUS News & World Report
# 26th Yakanyanya kukosha yakazvimiririra yakasununguka hunyanzvi makoreji neKiplinger Yemunhu Mari
Yunivhesiti yekutanga inogadzira vadzidzi veFulbright vekuUS zvakanyanya - vakasungirwa pakati pezvikoro zvebachelor mu1
# 1 "Yakanyanya kunaka kambasi" munyika nePrinceton Ongororo
Richmond University Kugamuchirwa Mwero
Yunivhesiti yeRichmond inopa isingasunge Yekutanga Kuita, inosunga Yekutanga Sarudzo I uye II, uye Yakajairika Sarudzo zvirongwa zvegore rekudonha kune vekutanga gore vanyoreri.
Yunivhesiti yeRichmond yakagamuchirwa inosarudzwa zvakanyanya nekutambira mwero we28% uye yekutanga kubvumwa mwero we33.4%.
Kunyangwe, hafu yevanonyorera vakabvumidzwa kuYunivhesiti yeRichmond vane mamaki eSAT pakati pe1290 na1460 kana iyo ACT mamakisi e30 ne33.
Nekudaro, chikamu chimwe muzvina chevakabvumirwa kunyorera vakawana zvibodzwa pamusoro peaya maseru uye kota imwe yakapihwa pazasi pematanho aya. Yekupedzisira nguva yekushandisa ndiJan. 1 uye mari yekunyorera kuYunivhesiti yeRichmond iri $ 50.
Richmond 2021 Kunyoresa Zvinodikanwa
Vakuru vakuru veYunivhesiti yeRichmond vanofunga a GPA yemudzidzi chinhu chakakosha kwazvo pakudzidza.
Anonyorera chikoro chesekondari kirasi chinzvimbo, kana chiripo, chinoonekwa chakakosha uye tsamba dzekurumbidza dzinoonekwa dzakakosha kune vanogamuchirwa vakuru paUniversity yeRichmond. Hazviperi ipapo. Sezvo kubvumidzwa kuchipihwa kumatunhu akasiyana, zvinodiwa zvinogona kusiyana.
Chekutanga Gore Vanyoreri Zvinodikanwa zvekugamuchira
Mukufunga kweYunivhesiti yeRichmond yekubvuma mwero. Mumwe nemumwe anonyorera anozogamuchira email ine mirayiridzo yekuti ungawana sei yavo Dandemutande Portal account mukati mevhiki rekushandisa kuRichmond.
Vanyoreri vanofanirwa kugara vachipinda kuti vaongorore yavo yekuongorora uye vozadzisa kuzara kwekushandisa kwavo.
Mari Yekushandisa ndeye $ 50 USD. Iwe unogona kuona yedu yemari yekuregedza mutemo pano.
Zvikumbiro zvinogamuchirwa kuburikidza Kushanda Kwakawanda or Kushandira Coalition. Zvese zvekutsigira zvekushandisa zvekushandisa zvinofanirwa kunge zviri pafaira neyakavimbika nguva yekupedzisira yeiyo inoenderana chirongwa chekushandisa.
Zvese zvinoshandiswa pafaira naDecember 1 (zvisinei nehurongwa hwekushandisa) zvichatarisirwa kuRichmond Scholars.
Chirongwa Chekushandisa Application Deadline Kwekuvimbika Kwekupedzisira Anofungidzirwa Notification Zuva
Sarudzo Yekutanga I * November 1 November 15 December 15
Kutanga Kuita November 1 December 1 January 25
Pakutanga Sarudzo II * January 1 January 15 February 15
Kugara Kuita Chisarudzo January 1 February 1 April 1
Mhinduro imwe chete yenyaya inodiwa. Sarudza kubva pane zvinotevera.
Ndeipi iri yekukurumidza kudenha kwepasirese, yemagariro nyaya, kana kusaruramisira kwemarudzi nyaya yaunofarira iwe? Ndeapi mhinduro kana mhedzisiro iwe yaunotarisira kuona?
Panguva yaunopedza koreji, pachave nemabasa asipo nhasi. Tsanangura imwe yacho uye kuti Richmond ingakugadzirira sei.
Iwe unofanirwa kushandisa gore rinotevera mune zvakapfuura kana ramangwana. Waizofamba gore ripi uye nei?
Shoko Rakakwana: Minimum 350. Kunonyanyisa mazwi mazana matanhatu nemakumi mashanu.
Maitiro Ekutumira: Iyo Richmond Essay inosanganisirwa muCommunity Chikumbiro uye Coalition Chikumbiro kana inogona kuendeswa mune yako Spider Portal.
High School Chikoro
Chinyorwa chepamutemo chesekondari chine mamakisi 9-11 chinodiwa.
Maitiro Ekutumira: Gwaro iri rinofanirwa kuendeswa nemukuru wechikoro uye rinogona kutumirwa kuburikidza neemail, yechitatu-bato sevhisi sevhisi (seNaviance, Parchment, kana Scoir), kana tsamba.
Cherechedza: Yekupedzisira chikoro chepamusoro chinyorwa nekuda kwekunyoresa.
Gwaro iri rakapedzwa nemukuru wechikoro. Inopa chimiro chechikoro chepamusoro uye pfupiso yenzvimbo yemumiriri yekudzidzira mukati memamiriro ekirasi yavo yekupedza kudzidza.
Chero fomu rechikoro chesekondari rinogamuchirwa, kusanganisira Common Application kana Coalition Chikumbiro fomu, kana fomu rinopihwa nechikoro chepamusoro.
Maitiro Ekutumira: Gwaro iri rinofanirwa kuendeswa nemukuru wechikoro, uye rinogona kutumirwa kuburikidza neemail, yechitatu yebasa emagetsi sevhisi (seNaviance, Parchment, kana Scoir), kana tsamba.
Imwe tsamba yekukurudzira kubva kune mukuru wechikoro inodikanwa, zvine musoro kubva kune chipangamazano wechikoro.
Kusvikira kune maviri ekuwedzera mazano anozoongororwa pamwe nechishandiso; zvisinei, zvakapihwa vhoriyamu inogamuchirwa gore rega rega, izvi hazvigone kuteverwa kana kubvumidzwa zvakasiyana.
Maitiro Ekutumira: Tsamba dzinofanirwa kuendeswa nemukuru wechikoro kana munhu anonyora tsamba yacho akamirira iwe Iyo gwaro inogona kutumirwa kuburikidza neemail, yechitatu-bato zvemagetsi sevhisi (seNaviance, Parchment, kana Scoir), kana tsamba.
Kune iyo kirasi inopinda muKudonha 2021, iyo University yeRichmond haizodi SAT / ACT zvikoro kuti zvikwanise kunyorera kwako.
Kana iwe usingade kuve neyakaenzana mhedzisiro yemabvunzo akaisirwa mukuwongorora kweshoko rako, ndapota ratidza kudaro kana uchikurudzirwa pachishandiswa.
Hatidi iyo SAT Essay chikamu, ACT Chinyorwa chikamu, kana SAT bvunzo bvunzo.
Richmond inosimudzira zvese iyo ACT uye iyo SAT, asi kwete pamiyedzo.
Bvunzo yekodhi ACT - 4410; SAT kodhi yekuyedza - 5569
YOKUPEDZISIRA YEMAHARA DATE KUZIVISWA NOKUDZIDZA KURONGA
Sarudzo Yekutanga I
Nyamavhuvhu ACT uye Gumiguru SAT manejimendi; zvibodzwa kubva muna Gumiguru ACT naNovember SAT manejimendi anogona kunge achizvitaurira.
Gumiguru ACT uye SAT manejimendi; zvibodzwa kubva munaNovember SAT manejimendi zvinogona kunge zvichizvitaurira.
Sarudzo yekutanga II
Zvita Zvita uye SAT manejimendi.
Kugara Kuita Chisarudzo
Zvita Zvita uye SAT manejimendi; zvibodzwa kubva munaFebruary ACT manejimendi zvinogona kunge zvichizvitaurira.
Dhawunirodha repamutemo bvunzo mamaki kubva kuColleBoard kana ACT, uye wega-rondedzero kuburikidza neSpider Portal
Raira iro repamutemo rezvibodzwa kutumirwa zvakananga kubva kuCollegeBoard kana ACT
Kumbira chipangamazano kuti atumire chirevo chepamutemo chepamhepo kuburikidza neemail kana yechitatu-bato sevhisi sevhisi (seNaviance, Parchment, E-Scrip, Scoir, kana Scribbles).
Cherechedza: Vese vanyoresa vadzidzi vanofanirwa kuendesa zvirevo zviri pamutemo kubva kusangano rekuyedza.
Senior Progress maGrade
Inodiwa maGrade neChirongwa Chekushandisa
Pakutanga Sarudzo I - Yekutanga kota / trimester epamusoro mamakisi
Iyo Yekutanga Kuita - Yekutanga kota / trimester epamusoro mamakisi
Pakutanga Sarudzo II - Yekutanga semester / trimester / kota yepamusoro mamaki
Kugara Sarudzo - Chekutanga semester / trimester mamakisi epamusoro
Makore epamusoro ekufambira mberi mamakisi anofanirwa kuendeswa nekukurumidza pavanongowanikwa. Magiredhi achagamuchirwa mushure menguva yekupedzisira yekuzivikanwa, asi inofanirwa kunge iri pafaira chisarudzo chekubvuma chisati chapihwa zvizere uye chaburitswa.
Maitiro Ekutumira: Scan kana kuteedzera yekufambira mberi giredhi mushumo, uye wega-chirevo kuburikidza neSpider Portal
Tora chinyorwa chepeji yepamhepo mamaki peji (iyo kubatwa inofanirwa kusanganisira rako rekutanga uye rekupedzisira zita), uye wega-chirevo kuburikidza neSpider Portal
Kumbira chipangamazano kutumira mamakisi ekufambira mberi kuburikidza neemail kana yechitatu bato sevhisi sevhisi (seNaviance, Parchment, kana Scoir).
Supplemental Zvinyorwa (sarudzo)
Zvinyorwa zvekuwedzera zvinosarudzika, uye zvinogona kutumirwa mukuwedzera kune zvinyorwa zvekushandisa zvinodiwa.
Vadzidzi vanokurudzirwa kuti vatarise kuti ruzivo rwavo rwakasarudzika rwunopa sei ruzivo rwevadzidzi, zvehunyanzvi, uye nezvavanosangana nazvo.
Maitiro Ekutumira: Isa mune yako Spider Portal kana email ku [email inodzivirirwa]. Kana iwe uri kutumira zvinowedzera zvinhu muchimiro che skrini, ndokumbira utumire sechibatanidza kune iyo email. Hatisi kukwanisa kuongorora zvidzitiro zvinotumirwa mukati memuviri weemail.
FAQs nezve Richmond University Kugamuchirwa Mwero
Iyo Yunivhesiti inosanganisa maitiro ezvepabonde, kuzivikanwa kwevakadzi, uye kutaura kwechikadzi mune yayo isiri-rusarura mutemo?
Ehe! Zvepabonde, kuzivikanwa kwechikadzi, uye kuratidzwa kwevakadzi kunosanganisirwa muYunivhesiti isiri-rusarura mutemo.
Ini ndinowana sei tsamba yangu?
Vadzidzi vekugara vanozopihwa yeYunivhesiti post office mailbox. Mabasa evadzidzi vatsva anowanzoitwa naNyamavhuvhu 1 yenguva yekudonha. Vadzidzi vanogona kupinda muBannerWeb kuti vatore kero yavo yekutumira.
Iko posvo hofisi iri kuHeilman Center. Tsamba haiendesi kumakamuri ega ega.
Kana uine mimwe mibvunzo, ndapota nyorera Tsamba Yemasevhisi pa804-289-1890.
Ndichapihwa wekugara naye kana iye wandinogara naye abuda kana kubuda?
Kana iwe uchida kukumbira mumwe waunogara naye, bata Taylor Walsh pakarepo. Chipo chinowanikwa chekupihwa basa neResidence Life & Hofisi hofisi chero nguva.
Kune zviitiko, kunyanya panguva yekuzorora kwechando, panowanikwa nzvimbo dzinowanikwa nekukurumidza nzvimbo painowanikwa nekuda kwevadzidzi vari kumirira kunyorwa kugoverwa.
Ndiani wandinosangana naye kana ndichida kubva pamusasa?
enamel Patrick Benner. Sanganisira iyo chikonzero icho iwe chaunoda kufambisa kubva kembasi.
Ndiani wandinotaurirana naye maererano nekukuvadza kubhadharisa?
enamel Jocelyn Hermosilla kana uine mibvunzo ine chekuita nekubhadhara kubhadharisa.
Izvo zvirimo pane ino saiti zvakatumirwa zvine vavariro dzakanaka. Kana iwe uri wako zvemukati uye uchitenda kuti yako copyright yakatyorwa kana kutyorwa, ita shuwa kuti utibate isu ku [suppor[email inodzivirirwa]] kuisa chichemo uye zviito zvichatorwa nekukasira.
Cardiovascular Chirwere Njodzi Zviitiko pakati peVadzidzi muHurumende Sekondari Zvikoro
DS Adegbenro ICT Poly Inobuda Nyowani Rector
Maitiro Ekunyorera kweMaldives Visa yeNigeriya 2021 Dzazvino Gadziriso
UNSW Bhizinesi Chikoro Bhizinesi Scholarship yeVadzidzi Venyika Dzese 2020 Kunyorera
Scottrade Account Saina Up uye Login Portal 2021 Kugadziridza
NPIHP Chamhembe Afrika Nyukireya Nhoroondo Kubatana kweVamiriri Venyika,
Nyorera Izvozvi zveWesterfield College, Lagos Kubatira - 2016
Tags: Richmond University Kugamuchirwa
« Literary Analysis Essay Mienzaniso 2021 Ona Nhanho nedanho Gwaro
Kuongorora Nyaya dzeMusoro 2021 Ona Yakagadziridzwa Yakazara Rondedzero »